पावर, मनि र सेक्स | Bichar | Image Khabar
होमपेज / Bichar / पावर, मनि र सेक्स
पावर, मनि र सेक्स | Published: December 17, 2015 | बिहीवार2पुष, 2072 | 12:45 PM | Viewed: 2345 times
पेशल आचार्य - हिन्दीमा घतलाग्दो मुहावरा छ –‘तुँ करे तो रासलीला, हाम करे तो क्यारेक्टर ढिला ?’ यसमा निहित आसयले भनेको कुराको अन्तर्यमा पावर र सेक्स मिश्रण छ ।
संसार नै पावरको प्रतिफल हो । जैविक, भौतिक र नैतिक सफलतामा पावर जोडिएको हुन्छ । वयश्क नरनारी घर्षणपछि नयाँ जीव जन्मन्छ । सबै प्राणी जगत्मा यो लागू हुन्छ । जागिर, ठेक्कापट्टा, उद्यम र सबै किसिमका सेवामुखी (?) मुखुण्डाधारी मानिसहरू पावर पछि लाग्छन् । सबैभन्दा बढी पावर राजनीतिमा केन्द्रित थियो, छ र हुन्छ ।
‘मनि’ याने पैसा जोसुकै मानिसको कमजोरी । अहिले कलियुग हो । एकजना कविले हिन्दीमै सुनाए –‘रामयुग मे दूध सस्ता, कृष्ण युगमे घी, कलियुगमे दारू सस्ता दुम दबाकर पी ।’ सटिक र मार्मिक यो कविताले अहिलेको विनिमार्णवादी युगको अघोरै चित्रण गरेको छ । माओवादी पैसाकै कारणले दस वर्षमा पाँच टुक्रा भए । डा. बाबुराम श्रीमतिका कारण अलोकप्रिय बनाइए । कर्मचारी, नेता र पत्रकार सबै पैसामा बिकेका छन् । सरकार गठन÷विगठनमा पैसाको चलखेल र सुरासुन्दरीको कुरा आउनु पैसा र सेक्स कै करामत हो ।
सेक्स संसारको केन्द्र । मान्नुस या नमान्नुस् । यसैलाई आधार बनाएर संसार सृष्टिचक्रको वृत्त खिँच्छ । अधिकांश मानिसहरू कम्बल ओढेर घिउ खान्छन् । नाइँनाइँ भन्दै धेरै भोगी मानिसहरू सेक्स कमजोरीका कारण संसार व्यूहमा फँसे÷फँसाइएका छन् ।
भनिन्छ –‘संसार जित्ने मानिस घरमा हार्छ ।’ यो भनेको के ? मानिस संसारलाई चित्त बुझाउँन सक्छ तर आफ्ना केटाकेटी र आइमाईका हकमा भने लुत्रेकान पार्दै घर छिर्छ । संसारलाई बुझाउने सुकरात श्रीमतिसँग डराउँथे विचरा ! मायाभित्र सेक्स र सेक्सभित्र माया लुकेको हुन्छ । यो सूत्र र भाष्य लोग्नेस्वास्नीमा मात्रै सिमित छैन । प्रेमी प्रेमिकामा, लिभिङ् टुगेदरमा र अभिषारिका समेतमा ससर्त लागू हुन्छ । प्रेमको अर्थशास्त्र यसैमा गोलचक्कर काट्छ । काटिरहेको छ ।
संसारमा जुनसुकै पावरको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी भएको छ । अर्को एउटा संगीन कविताले भन्छ –‘देशको लागि लड्ने मानिस शालिक भएछ, देशद्रोही पो मेरो देशको मालिक भएछ ।’ यो पुरानै कवितांश भए पनि बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भैरहन्छ । जनतालाई खुसी लाग्छ यस्ता कडा व्यङ्ग्यभाव भएका कविताको पाइन् देखेर । तर यी सब सफ्ट पावर मात्र हुन् । हार्ड पावर त राजनीतिक क्रूरशक्ति हो । भनून् बहुदलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्तामा हुँदा उनकी विदेश पलायन भएकी र नेपाल आएपछि काँग्रेस भइटोपलेकी छोरी सुजाता कोइरालाको फाइँफुट्टी देख्दा लाग्थ्यो । सबैसबै पावर नै रहेछ । उनका ज्वाइँ रुवेल चौधरीले (सासू सत्तामा हुँदा) नेपालमा कल बाइपासका कत्राकत्रा घोटालाहरू गरे तर उनलाई नेपालको कुनै निम्छरो कानुनले छुनसम्म पनि सकेन । त्यो बेला सुजाताको विरुद्धमा बोल्नेको जीब्रो थुतिन्थ्यो ।
पन्ध्र सालअघि ऊ बेलामै महाकवि देवकोटा भन्थे –‘जसको हातमा लठ्ठी उसको भैँसी, ब्रह्मचारी मुडुलो ।’ यो कविताको भावमा शक्ति र सत्तालाई झाँको झारिएको छ । रुबेल सासू माताको राजनीतिमा बल कम हुँदै गएपछि एकाएक विदेश भासिए । अहिले पत्तोफाँट छैन । काँग्रेसको शक्तिमा सुजाता अहिले पनि नेपाली राजनीतिको शक्तिकै इर्दगिर्दमा रहेर फ्याउँफ्याउँ गर्दैछिन् ।
नेपाल संसारकै हरितन्नम मुलुक हो । यहाँका हरेक देखिने र नदेखिने सबै राजनीतिक घोटालामा पैसा, यौन र पावरको हैहुकम देखिन्छ । पञ्चायतमा पावर भएका बहुदल आएपछि दुला पसे । बहुदलमा पावर नचाउने लोकतन्त्र कालमा कुकरमा पाकेको साग भए । अब गणतन्त्र आएको छ । भन्नलाई गणतन्त्र भने पनि यो बास्तवमा पावरकै ‘गनतन्त्र’ हो । माओवादी बन्दुक देखाएरै नेपाली राजनीतिमा स्थापित भयो । अहिले मधेशीहरू पनि बल प्रयोगबाटै हारिएको चुनाव र ब्यालेटको वश्त्रहरण गर्दैछन् । सुको सरकारका महत र निधिले पावरकै भरमा जस्तापाता र फाष्ट ट्रयाकमा चलखेल गरेथे । वामदेव बाटो काट्दा जेब्राक्रसबाट हिँड्दैनथे । बरू कुकुरले जेब्राक्रसबाटै बाटो काट्यो । अहिले तेलको कालो व्यापार भएको देख्दा लाग्छ –देशमा मुन्द्रे, कुण्डले, पाखुरे र तिघ्रेहरू कै शासन छ ।
देश र मधेशका आन्दोलन हुन या जुनसुकै पार्टीहरूले बन्द हड्ताल गर्ने ऐलान हुन् सबैमा पावर लुकेको हुन्छ । कार्यकर्ता धेरै र हिँसात्मक हुने खालको छ भने त्यो स्वतःस्फूर्त रूपमा सफल हुन्छ । हरेक सफलताका पछि पावरले काम गरेको हुन्छ । चाहे बिजुलीकै पावर सकेट नै किन नहोस् ।
पावर, मनि र सेक्समा नेपाली राजनीति २५० वर्षदेखि अघि बढ्दै छ । जसको पुष्टि विगत्का नेपाली राष्ट्रिय परिघटनाले अझै गर्दैछन् । जंगबहादुरले मच्चाएको कोतपर्वको भित्री पाटोमा रानीसँग उनको रागात्मक सम्बन्ध रहेको आशंका गरियो । बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीबीच भलै सेक्सको दुरुपयोग भा’को थिएन होला तर त्यहाँ पावर एक्सरसाइजको गुह्य अहम् लुकेको थियो । रणबहादुरले मिश्र बाहुनकी विधवा छोरीलाई उनको सन्तान राजा बनाउने सपना देखाएरै चौथो विवाह गरे । नेपाली राजनीति त्यहीँदेखि ओरालो लाग्या हो । अझै लाग्दै छ ।
पैसाको मामलामा एमालेमा राज्यलक्ष्मीका ‘लक्ष्मी’ मा धेरै कमरेड डामिएका रै’छन् । लोकमान पावरकै आड लिएर अहिले देशका पावरवालाहरूका निद हराम गर्न पावरवाला चस्माको प्रयोग गरी अनुसन्धानरत छन् । प्रम ओली उनलाई ललकार्दै छन् । नेपाली फुटबलको ‘म्याच फिक्सिङ्’ को स्वस्थानी कथा र गणेश थापाको मनिको चर्तिकला ती सबै पावरका खेल हुन् । जनताले बुझ्या छैन र !
नौ जना राणामध्ये जुद्ध शमशेर धेरै कामुक थिए । उनले सिँहदरबारका लामा भ¥याङ्हरूमा मस्तमस्त तरुनीहरू अर्धनग्न कपडामा उभ्याएका हुन्थे । उनी भरेङ चढ्दै जाँदा जब थाक्दथे तिनीहरूको स्तन पक्रँदै माथि चोटामा जान्थे । सत्तामा राणाको हालीमुहाली हुँदा तिनले राजालाई विद्रोह नगरून भनेर धेरै तरुनीहरू रानी बनाई खोपीका सेवामा जुटाउँथे । आफू राजाका नाममा बेढङ्गी शासन गर्थे ।
राजा महेन्द्रको असामयिक निधन हुनुमा लुकेको पाटोभित्र तात्कालिक समयमा नेपालमा लागेको नाकाबन्दी र इन्दिरा गान्धीसँगको पावर टसललाई नै लिइन्छ । कुरो के हो ? समयक्रममा अझ स्पष्ट हुँदै जाला । पञ्चायतमा पनि शक्ति र सत्ताका धेरै स्वाद् चाखेका राजनीतिज्ञका अघिपछि कुनै न कुनै सुन्दरीका नाम जोडिए । त्यसबेला जानेमानेका राजनीतिज्ञ शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय बेला न कुबेला स्त्री काण्डमा मुछिएकै हुन्थे । एकपटक उनी डली गुरुङसँग नराम्रोसँग विवाद्मा थिए । आखिर के हो यसको राज ?
नेपाल मात्र नभएर संसारकै पनि राजनीतिमा सेक्स जोडिएको छ । विश्व सुन्दरी क्लियोपेट्रासँग सम्भोग गर्न त्यसबेलाका राजामहाराजाहरू लालयित र लम्पट हुन्थे । उनी आफ्नो सुन्दरतालाई बचाइराख्न दिनहूँ गदाहाको दूधले नुहाउने गर्थिन् । उनका आसिकीहरू त्यही दूध पनि बट्वारा गर्थे अनि तृष्तिको सास फेर्थे ।
महात्मा गान्धीले यौनलाई अनेकौं प्रयोग र अनुसन्धानका नाममा खेलाएका थिए । गान्धी आत्मकथा पढ्नेले त्यो भलिभाँती थाहा पाउँछ । हिटलरको विवादास्पद प्रेम सन्दर्भ र रहस्यमय आत्महत्या मात्रै नभएर भूपू अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र मोनिका लेवेन्स्कीको कुचर्चित यौन काण्डले विश्वको ध्यान खिँचेको थियो । सम्पादकले अखबारका करोडौं पाना खर्चिएका थिए । कैँयौँ दिन टेलिभिजनले एउटै मात्र इसुलाई न्युज बनाए ।
पैसा त्यस्तै अदृश्य पावर बनेको छ –राजनीतिमा । भारतका धेरैजसो नेताहरू भ्रष्टाचारमा फँसे । फँसाइएका छन् । जय ललिताका १८ सय जोर जुत्ता, अकूत सम्पत्ती र धर्मपुत्रको विवाहमा उनले खर्च गरेको ४ करोड रुपैयाँ सिबिआईको टाउको दुखाई नै बन्यो । मायाबतीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेलसजाय मात्र भएन राजनीति नै चौपट भयो । विहारका लालु चारा घोटालामा जेल परेपछि स्वास्नी रावडीलाई अघि सारेर मुख्यमन्त्री नै बनाए । अहिले उनका छोराहरू राजनीतिमा सक्रिय भए । उनी पनि बूढो गोरुले कोरली ओगटेझैँ अझै लिखिरलिखिर राजनीति गरिरहेका छन् ।
नेपालका नेताहरू त पावर, मनि र सेक्सका मामलामा अति नै भल्गर छन् । भीमसेन थापादेखि ओलीसम्मका ३६ जना प्रधानमन्त्रीमा सेक्सका सबालमा बद्नाम नभएका प्रमहरू त केहीकेही मात्रै होलान् । यस मामलामा तुलसी गिरी नामी थिए । खेलकुदको पर्दाभित्रबाट पञ्चायतमा शरदचन्द्र शाहको चक्चकी हेर्न लायक थियो । बहुदले मन्त्रीको कुरै नगरौं । बलबहादुर केसी सत्ताको मादमा पर्खाल चढ्न समेत भ्याउने मन्त्री हुन् । त्यसैगरी बद्री मण्डल नर्स काण्डमा मुछिए । एमालेका कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने एकजना सांसदले आफ्नै छात्रा कुदाएथे । खोजी पस्दा कति छन् कति यस्ता घिनौना परिघटनाहरू ?
‘संसारको सबैभन्दा सुन्दर फूल यौन हो तर त्यो धरापमा छ’ –नेपालका एकजना नामुद् कवि भन्दैछन् । माओ हुन् कि पोलपोट, पुटिन हुन् या रुसो पढी ल्याउँदा सबै उम्दा मानिसहरू यौनमा फसेका देखिए । यौन तेरो लीला अपरम्पार छ । तँलाई कोटिकोटि नमन छ । सबैमा चेतना भया ।